About N'onwe Electric Skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Yana electric skateboard na-ekpo ọkụ ma nabata site n'oge a na-eto eto, dị ka ogologo dị ka nwere ihe ndị magburu onwe Electric itule osisi , ha na-yikarịrị ka eme ụfọdụ N'onwe dị ka ha si chọọ. Nso nso m chọpụta ụfọdụ jụụ N'onwe skateboard na Instagram.
Ijeụkwụ: A na-awụ ọsọ E-longboard ga-enyere gị ịga nke ọma na ị na-aga na oge. The nkịtị ọsọ 30km kwa hour, n'elu ọsọ ike rutere 45km kwa hour, na-aga ngwa ngwa. Ọzọ ntule bụ ngwá ọrụ na electric skateboard ga-izute niile kwa ụbọchị na-aga aga, dị ka mkpụmkpụ-njem, na-aga ahịa na na na.
Ndị na-esonụ na-na Koowheel asịwo na-egosi nke Electric longboard Skateboard D3M na anyị họrọ na Instagram. Nke onye ị na-achọ? Ha na-jụụ ma dị egwu. Koowheel bụ nnọọ fashionable electric skateboard na-akwagide nnukwu isi nke na-eso ụzọ na-eju ya arụmọrụ. Gịnị mere o ji na-ekpo ọkụ? Ọ bụ Dual Brushless Hub-Motors, 7-oyi akwa nke CanadianMaple Wood + iko eriri (nhọrọ), The nwechapụ bụ n'ala 85mm (3.35inch), adabara niile okporo ụzọ na obodo. Ọzọkwa, replaceable batrị mkpọ, 2pcs batrị ngwugwu nwere ike adịru 60km, na-aga ogologo. Ya mere, anyị nwere atụmanya dị elu na ndị e stoked mgbe ọ na lastly bịarutere.
Mgbe ị na-ahụ ndị a okike N'onwe Gị, Ị nwere a ọzọ pụrụ iche echiche n'uche gị? Ọtụtụ echiche na-kere ndị mmadụ, ị nwere ike na-egosi gị pụrụ iche echiche dị ukwuu dị ka o kwere omume na mgbe biko ịkọrọ anyị site na mkpado Koowheel gị Instagram. Koowheel ukara website na Facebook ga-eso gị KOOWHEEL ahụmahụ.
Ha nwere ike ọ bụghị njem ya, ma mụtara na a obere oge. Ihe ndị a bụ a ngụkọta ịma na-enweta gburugburu na. Were ya na ị na a ọha iga na-agba ịnyịnya ya na ụzọ gị obi. Nso nso, Koowheel mepụtara 2nd Generation Electric Skateboard Kooboard na replaceable wiil. Ugbu a preorder pụrụ ikwere. Ma eleghị anya, ị ga-arịọ na ihe bụ ihe ọhụrụ na 2 nd ọgbọ otu? Ka m gwa gị site n'okpuru.
3. New Motors / wiil
New 350W x 2 Motors na replaceable Pu wiil
Pụrụ iche a haziri ga-enyere Motors obi jụrụ maximumly
4. emelitere Battery
New njikọta nke batrị ezere ejikọta nke
New omume ga-echebe batrị si n'elu boro ebubo site regenerative braking. Mgbe ahụ Kooboard ga-agbasa nwayọọ nwayọọ na-akwụsị. New onyx oche & adịgide Mezie, na ndị ọzọ ...